Ngaphambili Isiqendu Esifihliweyo se-Black-ish ngoku siyafumaneka kwiHulu - Inkcubeko Yopopu
Isiqendu se Umnyama-ish ethe yagcinwa ngaphezulu kweminyaka emibini iya kuthi ekugqibeleni ikubone ukukhanya kwemini.
Ikhekhe lomtshato lemon kunye nokuzaliswa kwe-raspberry
Umnyama-ish umyili, uKenya Barris, utyhile nge-Instagram ngoMvulo ukuba isiqendu esinesihloko esithi 'Nceda, Mntwana, nceda' ukusukela kwisizini yesine ngoku sizakufumaneka kubabukeli kuHulu.
Ngo-Novemba ka-2017, senza isiqephu se Umnyama-ish enesihloko Nceda, Mntwana, Nceda, 'ubhale watsho u-Barris. U-Barris uqhubeke wachaza ukuba ityala lezopolitiko belikhona ibekwe emkhenkceni ngenxa 'yantlukwano yoyilo.'
'Besingunyaka omnye emva konyulo kwaye sifike esiphelweni sonyaka osishiyileyo, njengabaninzi baseMelika, besilwa nelizwe lethu kwaye sixhalabile ngekamva labo,' uqhubeke watsho. 'Ezo mvakalelo zithululelwe kwiphepha, zaba yimizuzu engama-22 kumabonwakude endandinguye, kwaye ndisenguye, ndinelunda kakhulu ngaye. Ndiyakucela Mntwana wam, ndicela ungakhange ubonakale ngeli xesha lonyaka kwaye, ngelixa uninzi luye lwathelekelelwa malunga nesiqulatho salo, esi siqendu asikaze sibonwe esidlangalaleni… kude kube ngoku. '
'Nceda, sana lwam, Nceda' bekufanele ukuba ibe sisiqendu se-13 sexesha lesi-4. Ithe yakutsalwa, u-ABC wathi inethiwekhi kunye neBarris abakwazanga ukuza kulungelelwaniso loyilo.
Enye yezinto ezihlala zisenziwa Umnyama-ish Ikhetheke kakhulu yindlela ekuyivavanya ngobuchule ngayo imiba entsonkothileyo yezoluntu ngendlela yokonwabisa kunye nokufundisa ngaxeshanye, utshilo isithethi sothungelwano ngo-2018. '
Isishwankathelo se-2018 sesiqendu esibhalwe nguBarris noPeter Saji sifundeka ngolu hlobo: 'I-Dre isemsebenzini womntwana ebusuku ngexesha lesiphango, kwaye indlu iphaphile. Uthatha isigqibo sokufunda ukukhala ngeDevante ibali lokulala, kodwa xa oko kungakwenzi iqhinga, uDre uyilahla ecaleni kwaye aqala ukubalisa ibali lakhe malunga nemeko yangoku yelizwe ngendlela eya kuqondwa nguDevante, kwisiqendu esikhethekileyo … '
'Nceda, Baby Nceda' ifumaneka kwiHulu ekupheleni kwexesha lesine lethebhu. Inkulumbuso yesiqendu iza emva Umnyama-ish Ukhuseleko lwabakhethiweyo bamaBhaso ama-Emmy amaBhaso okuQala aManyeneyo kubandakanya uMlingisi oPhambili kwiNkqantosi kunye noMlingisi oPhambili weNkokeli kwiComedy Series ka-Anthony Anderson noTracee Ellis Ross.
wayeneminyaka emingaphi eazy xa wasweleka
phezulu 50 abadlali kwimbali nba
Imiboniso bhanyabhanya kathathu yokubukela kwiasidi
Umyalezo obhaliweyo ocima ifowuni
Abadlali abali-15 abaphezulu kwi-nba